အားကစားမော်ကွန်းတိုက် - စာမျက်နှာ ၁၀ မှစာမျက်နှာ ၃ - တယ်လီ relay
Manchester United vs. Watford – Rapport de match de football – 23 février 2020 –…
Tele RELAY တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2020 0
Bruno Fernandesamarqué son premier but à Manchester United avant Anthony Martialaajouté une exquise seconde dans une victoire 3-0 contre Watford dimanche.Victoire sur Chelsea lundi avait relancé le défi de United pour les quatre…
အာဆင်နယ် vs. အဲဗာတန် - ဘောလုံးပွဲအကျဉ်းချုပ် - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် - ESPN
LIVE: အာဆင်နယ်အသင်းသည်အဲဗာတန်ကိုပထမအကျော့၌အနိုင်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် http://espn.com/soccer/match?gameId=541578 တွင်ပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
Leverkusen သည် Augsburg 2-0 ကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံလိဂ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်
BERLIN (AP) - ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကဘွန်ဒက်စ်လီဂါတွင်အဂ်ဘာ့ဂ်ကိုအိမ်ကွင်းအနိုင်ရလဒ်ဖြင့်ချန်ပီယံလိဂ်၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ Moussa Diaby နှင့် Nadiem တို့၏တစ်ဝက်တွင်ဂိုးများ…
Foot OM - OM: Payet နဲ့ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Marseille? - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ 01
Photo Icon Sport ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊ ၂၀ ရက်၊ စနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်း Orange Vélodromeတွင် FC Nantes သည်ကြာရှည်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည် Watford 3-0 ကို EPL တွင်အနိုင်ယူပြီးဖာနန်ဒိုသည်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း (၄၀) ဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
MANCHESTER, Angleterre (AP) - Bruno Fernandes froidement roulé dans une pénalité pour son premier but pour Manchester United pour mettre sa nouvelle équipe sur la voie d'une victoire 3-0 contre la menace de relégation Watford…
အရင်းအမြစ်များ - Barca ကြယ်ပွင့်များသည် coronavirus စစ်ဆေးမှုများကိုခံယူနိုင်သည်
နံနက် ၇:၅၆ နာရီဘာစီလိုနာမှ HEMoises Llorens သတင်းထောက် FacebookTwitterFacebook MessengerPinterestEmail ဘာစီလိုနာကစားသမားများသည်ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံလိဂ်မတိုင်မီတနင်္လာနေ့ကနေပယ်လ်တွင်ဆိုက်ရောက်သည့်အခါအဖျားစစ်ဆေးမှုများကိုခံယူရမည်။
Manchester United vs. Watford – Résumé de match de football – 23 février 2020 –…
LIVE: မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အိမ်ရှင် Watford သည်ပဉ္စမနေရာရရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) http://espn.com/soccer/match?gameId=5 တွင်ပထမဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
MADRID (AP) - Real Madridadéclaré dimanche que l'attaquant belge danger édénique s'est fracturé le bas de la jambe droite, le mettant en danger de rater le reste de la saison. Hazardasubi la blessure lors de la…
Foot OL – OL : Aulas meilleur que son équipe, son téléphone va vibrer ! – Olympique…
Jean-Michel Aulas est de nouveau très actif sur les réseaux sociaux, et le président de Lyonases cibles préférées. Vincent Duluc en est une, et il s'en amuse autant qu'il s'en agace. Après avoir promis de se mettre en retrait lorsqu’il…
tibia ကျိုးနေသော City, Barca ပျောက်ဆုံးခြင်းအန္တရာယ်
မနက် ၆း၅၉ HEAlex Kirkland နှင့် Rodrigo FaezFacebookTwitterFacebook MessengerPinterestEmaildénénéniqueသည် Real Madrid Champions League ပြိုင်ပွဲမန်ချက်စတာစီးတီးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးစနေ၊
လွန်ခဲ့သော 1234... 217 လာမယ့်